Madaxweynaha kooxda Palermo oo weerar dhanka afka ah ku qaday Allegri, sababa la xiriira Paulo Dybala – Gool FM
Madaxweynaha kooxda Palermo oo weerar dhanka afka ah ku qaday Allegri, sababa la xiriira Paulo Dybala
(Italy) 13 Sept 2018. Madaxweynaha kooxda reer Talyaani ee Palermo Maurizio Zamparini ayaa weerar dhanka afka ah ku qaaday macalinka Juventus Massimiliano Allegri, sababa la xiriira inuu qorshihiisa ka reebay laacibka reer Argantina ee Paulo Dybala.
Zamparini ayaa mas’uul ka ahaa in Paulo Dybala uu yimaado qaarada Yurub, kadib markii uu kala soo wareegay horyaalka dalka Argantina sanadii 2012, wuxuuna laacibka sameeyay bandhig cajiib ah.
Madaxweynaha kooxda reer Talyaani ee Palermo Maurizio Zamparini ayaa dhinaca kale aaminsan in Paulo Dybala uu u dhaqaaqi doono mid ka mid ah kooxaha horyaalka La Liga ee dalka Spain, maadaama uu haatanba dalabyo ka helayo kooxaha Barcelona iyo Real Madrid.
Hadaba Maurizio Zamparini ayaa wareysi uu dhawaantan bixiyay wuxuu kaga hadlay laacibka reer Argantina Paulo Dybala.
”Xili kasta kuma arko Paulo Dybala shaxda koowaad ee kooxda Juventus, waxaan dareemayaa inaan doonayo inaan ooyo, waxaana ka mas’uul ah Massimiliano Allegri”.
“Dybala wuu bixi doonaa dhawaan, kooxda Juventus waxay go’aamisay inay ku iibin doonto 100 ilaa iyo 120 milyan oo euros, waxaa jira kooxo badan ee ka dhisan horyaalada England iyo Spain ee doonaya inay la saxiixdaan”.
“Bisha Janaayo waxaan u maleynayaa inuu aadi doono Spain, sababtoo ah Juventus waxay haatan heysta geesiyaal badan”.
Joel Campbell oo si weyn u amaanay goolhaayaha kooxda Real Madrid ee Keylor Navas